ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: December 2012
ဦးတန်ခူး၊ နှောင်းတန်ခူး အားလေ့လာခြင်း
မြန်မာပြက္ခဒိန် သက္ကရာဇ် တစ်နှစ်တာကာလ၏ နှစ်ဦး အစပိုင်းတွင် တန်ခူးလရှိပြီး နှစ်ကုန်ဆုံးခါနီး အချိန်တွင် လည်း တန်ခူးလရှိပါသည်ဟု ဆိုလျှင် မြန်မာပြက္ခဒိန်နှင့် အလှမ်းဝေးသူများအဖို့ မျက်စိလည်သွားပေမည်။ အမှန်တကယ်လည်း တန်ခူးလသည် နှစ်ကုန်ဆုံးခါနီးတွင်လည်း ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် ဦးတန်ခူး၊ နှောင်းတန်းခူး ဟူသော ဝေါဟာရများ ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြက္ခဒိန်သည် နေသွားနှင့် လသွားကို ဖော်ပြသောပြက္ခဒိန်ဖြစ်သော်လည်း ယခုအသုံးပြုနေကြသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပြက္ခဒိန်များတွင်မူ နှောင်းတန်ခူး၊ ဦးတန်ခူး ခွဲခြားဖော်ပြထားမည် မဟုတ်ပါချေ။ နေသွားရက်များအဖြစ် မှတ်သားနိုင်သော သုဒ္ဓဒိန်ရက်များကိုလည်း တွေ့မြင်ရလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုအချက်သည် တကယ်တမ်း တွေးကြည့်ပါလျှင် ၀မ်းနည်းစရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမူ အမွေအနှစ်တစ်ရပ်ဖြစ်သော မြန်မာပြက္ခဒိန်အား အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ပြက္ခဒိန်က ၀ါးမျိုလိုက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာပြက္ခဒိန်တွင်ထိုသို့ လိုအပ်ချက်များ ရှိသွားခြင်းဖြစ်မည်ဟု ကျွန်တော် ယူဆမိပါသည်။ ထိုသို့ အင်္ဂလိပ်ပြက္ခဒိန်က ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေသည့်အတွက် January လအတွက်သာ အလေးထားဖော်ပြရာ မြန်မာလအမည်များအတွက်မူ နတ်တော်/ပြာသို စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာရက်စွဲများ၏ ပုံနှိပ်စာလုံးများသည်လည်း အင်္ဂလိပ်ရက်စွဲများထက် သေးငယ်စွာ ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြခြင်း တို့ဖြင့်လည်းကောင်း ပြက္ခဒိန်ရှိ မြန်မာရက်စွဲများ အားလျော့သိမ်ငယ်နေရ ပြန်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာပြက္ခဒိန်သည် လိုအပ်ချက်များအချို့ ရှိနေသောကြောင့်လည်း မြန်မာပြက္ခဒိန်တွင် ဦးတန်ခူး၊ နှောင်းတန်ခူး ခွဲခြားရမှန်း မသိရှိကြသူများလည်း တော်တော်များများ ရှိနေပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာမှန်လျှင် ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ပြက္ခဒိန်အကြောင်းကိုလည်း နည်းနည်းပါးပါးလေးတော့ လေ့လာကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ငါ့နှယ်နော် . . . ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေ ရောက်သွားပြန်ပြီ။ မဆိုင်တာတွေ ထားလိုက်ပါတော့ . . ဦးတန်ခူး၊ နှောင်းတန်ခူး အကြောင်းလေးကိုပဲ ပြန်ဆက်ကြရအောင် . .
အောက်တွင် တန်ခူးလအတွက် နမူနာအဖြစ် မြန်မာပြက္ခဒိန်ကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ တန်ခူးလဆန်း 1ရက်မှ တန်ခူးလကွယ်ထိ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ ပြက္ခဒိန်သည် တန်ခူးလတစ်လတည်း အတွက်ဖြစ်သော်လည်း နှောင်းတန်ခူး၊ ဦးတန်ခူးအား သိသာစေရန်အတွက် အပေါ်ဆုံးတွင် ၁၃၇၄ နှောင်းတန်ခူး/ ၁၃၇၅ ဦးတန်ခူး ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့မြင်ရပေမည်။ တန်ခူးလ တစ်လတည်းမှာပင် နှောင်းတန်ခူး၊ ဦးတန်ခူး ဟူ၍ အမည်နှစ်မျိုး ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့အမည်နှစ်မျိုးဖြစ်သွားသလဲ ဆိုပါမူ မြန်မာပြက္ခဒိန်သည် နေသွားနှုန်းနှင့် လသွားနှုန်းတို့အား ညှိနှိုင်းတွက်ချက် ထားရသောကြောင့် ဟုသာ ဖြေရပါလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းအရာများ ရှင်းလင်းမြင်သာအောင် ဆက်လက်၍ ပြက္ခဒိန်တွက်နည်းများ ရေးသားသင့်/မသင့်ကိုမူ စဉ်းစားနေတုန်းပင် ရှိပါသေးသည်။ (ရေးရင်းနဲ့ မဆိုင်တာတွေ ရေးမိမှာစိုးလို့)
လဆန်း၊ လပြည့်၊ လဆုတ်၊ လကွယ်
မြန်မာပြက္ခဒိန်အား မှတ်သားရေတွက်ရာတွင် လဆန်း၊ လပြည့်၊ လဆုတ်၊ လကွယ် အစဉ်လိုက်ရေတွက်ရပါသည်။ ကောင်းကင်ရှိလမင်းသည်အား သတိထားကြည့်ရှုပါလျှင် အလင်းရောင်အား တစ်ရက်ထက် တစ်ရက် တဖြည်းဖြည်း တိုးလာခြင်းကို လဆန်းရက်များအဖြစ် မှတ်သားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် လမင်းကြီး တစ်ခုလုံး ၀ိုင်းဝိုင်းစက်စက် ၀င်းဝင်းပပ ထိန်လင်းနေခြင်းသည် လပြည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် လမင်း၏ အလင်းရောင် တဖြေးဖြေး ပြန်လည် ဆုတ်ယုတ်သွားသော လဆုတ်နေ့များအား တွေ့မြင်ရပြီး လမင်းကွယ်ပျောက်သွားသော နေ့သည် လကွယ်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ကောင်းကင်ရှိ သဘာဝနှင့် အနီးစပ်ဆုံးကိုက်ညီရန် မြန်မာပြက္ခဒိန်ကို စီရင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ကောင်းကင်ရှိလမင်း၏ အလင်းရောင်တိုး/ဆုတ် သဘာဝအတိုင်း လဆန်း၊ လပြည့်၊ လဆုတ်၊ လကွယ် အစဉ်လိုက်ရေတွက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်၊ တန်ခူးလဆန်း ၂ ရက်၊ လပြည့်၊ လဆုတ်၊ လကွယ် စသည်တို့မှာ လမင်း၏သွားနှုန်းများအား မှတ်သားထားခြင်းဖြစ်ပြီး သုဒ္ဓဒိန် ၁၊ သုဒ္ဓဒိန် ၂ စသည်တို့မှာ နေသွားနှုန်းများအား ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသုဒ္ဓဒိန်ရက်ပေါင်း 365.25 ရက်ခန့် ရောက်ရှိသော သင်္ကြန်အတက်နေ့တွင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁ နှစ်ပြည့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြက္ခဒိန်များတွင် နေသွား သုဒ္ဓဒိန်ရက်များအား တစ်နှစ်တာကာလ သတ်မှတ်ရုံမှလွဲ၍ ထည့်သွင်း ဖော်ပြလေ့မရှိသော်လည်း ယခုပြက္ခဒိန်တွင်မူ (မြန်မာပြက္ခဒိန်သည် နေသွား လသွား ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်) ဆိုသော အင်္ဂါရပ်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ ပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်မည်ဆိုပါက နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ၁ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် နေသွားရက်ပေါင်း 360 ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ နှောင်းတန်ခူးလဆန်6းရက်၊ အင်္ဂါနေ့သို့ ရောက်ပါမှ သုဒ္ဓဒိန် 365 ရက်၊ သင်္ကြန်အတက်နေ့သို့ရောက်ရှိပြီး မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁နှစ် (365 ရက်) ပြည့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်္ကြန်အတက်နေ့အား နှစ်ကုန်ဆုံးသောနေ့ ဟု မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ သုဒ္ဓဒိန် ဆိုသည်မှာ သုဒ္ဓ= စင်ကြယ်သော၊ ဒိန= နေ့ (စင်ကြယ်သောနေ့) ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃၇၄ နှောင်းတန်ခူး ရက်များသည် တစ်နှစ်တာကာလရက်ပေါင်း 365.25 ရက်ခန့်ရောက်ရှိပြီသော သင်္ကြန်အတက်နေ့ထိ ရေတွက်ရပါသည်။ သင်္ကြန်အတက်နေ့နှင့် မတိုင်မီ ရက်များသည် တန်ခူးလသို့ ရောက်ရှိသော်လည်း နှစ်သစ်ကူးပြောင်းခြင်း မရှိသေးပါချေ။ ယခုပြက္ခဒိန်တွင် တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်နေ့တွင် သုဒ္ဓဒိန် 360 ဟု ဖော်ပြထားသည်မှာ ၁၃၇၄ ခုနှစ်၏ နှစ်ဆန်း ၁ရက်နေ့မှ စတင်ရေတွက်လာတဲ့ ရက်ပေါင်း 360 ရှိပြီဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တစ်နှစ်တာကာလ 365.25 ရက်ခန့် မရှိသေးသဖြင့် နှစ်သစ်ကူးပြောင်းမှု မရှိသေးဟုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာပြက္ခဒိန်အား မှတ်သားရာတွင် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မတိုင်မီရက်များသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၏ နှစ်ဟောင်းရက်များ ဖြစ်ပါသဖြင့် . .
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်းခူး လဆန်း ၁ ရက် (11-4-2013)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်းခူး လဆန်း ၂ ရက် (12-4-2013)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်းခူး လဆန်း ၃ ရက် (13-4-2013)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်းခူး လဆန်း ၄ ရက် (14-4-2013)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်းခူး လဆန်း ၅ ရက် (15-4-2013)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်းခူး လဆန်း ၆ ရက် (16-4-2013)
သင်္ကြန်အတက်နေ့ပြီး နောက်တစ်နေ့သည် ၁၃၇၄ ခုနှစ် နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံး၍ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခုနှစ် နှစ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ဦးတန်ခူး ဟု ရေတွက်ရပါမည်။ ၁၃၇၅ ခုနှစ်၏ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှ စတင်၍ နှစ်ဦး အစရက်များ ဖြစ်ပါသဖြင့် . .
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဦးတန်းခူး လဆန်း ၇ ရက် (17-4-2013)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဦးတန်းခူး လဆန်း ၈ ရက် (18-4-2013)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဦးတန်းခူး လဆန်း ၉ ရက် (19-4-2013)
. . . . စသည်ဖြင့် ရေတွက်မှတ်သားရပါသည်။
အလွယ်အားဖြင့် မှတ်သားလိုပါက တန်ခူးလတွင် နှစ်ဆန်းတစ်ရက် မတိုင်မီရက်များအား နှစ်ဟောင်း၏ “နှောင်းတန်ခူး” ဟူ၍ မှတ်သားရပြီး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှ စတင်၍ နှစ်သစ်၏ “ဦးတန်ခူး” ဟူ၍ မှတ်သားနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့သည် ကဆုန်လဆန်း5ရက်နေ့တွင် ကျရောက်နေသည်ဆိုပါစို့။ ထိုအခါ တန်ခူးလ တစ်လလုံးကို နှောင်းတန်ခူးလဟု မှတ်သားရပါလိမ့်မည်။ တန်ခူးလတွင် နှစ်သစ်ကူးပြောင်းခြင်း မရှိသောကြောင့် ဦးတန်ခူးဟူ၍ ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ကဆုန်လဆန်း4ရက်နေ့ထိ နှောင်းကဆုန်လဆန်း4ရက်ဟု ရေတွက် မှတ်သားရပါလိမ့်မည်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ဖြစ်သော ကဆုန်လဆန်း5ရက်နေ့အား ဦးကဆုန်လဆန်း5ရက် ဟု မှတ်သားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် 1375 ခုနှစ်သည် တန်ခူးလတွင်ပင် နှစ်သစ်ကူးပြောင်း သဖြင့် ကဆုန်လအား ဦးကဆုန် စသည်ဖြင့် မှတ်သားရန် မလိုအပ်ပါချေ။
နှောင်းတန်ခူး၊ ဦးတန်ခူး စတာတွေ မမှတ်သားသော် ဘာဖြစ်မည်နည်း။
နေ့များ ပြဿနာ တက်နိုင်ခြင်း
ဗေဒင်အဟောများ လွဲချော်နိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကြုံတွေ့ရမည့် ပြဿနာ များစွာပင် . .
သင်သည် မွေးသက္ကရာဇ်အား သက္ကရာဇ် 1375 ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း7ရက် မွေးဖွားသည် ဟု မှတ်သားထားသည်ဆိုပါအံ့။ ဤတွင် ပြဿနာစပါပြီ . .
မြန်မာသက္ကရာဇ် 1375 ခုနှစ်တွင် တန်ခူးလဆန်း7ရက်သည် နှစ်ကြိမ်ပါဝင်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ရှင်းအောင်ပြောရသော် . .
မြန်မာသက္ကရာဇ် 1375 ခုနှစ်တွင် ဦးတန်ခူးလဆန်း7ရက် သည် နေသွားအရ သုဒ္ဓဒိန် 1 ရက် (နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့သည် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ဖြစ်ပါသည်။ (ခရစ်နှစ် 17ရက်- ဧပြီလ- 2013)
မြန်မာသက္ကရာဇ် 1375 ခုနှစ်အတွင်းမှာပင် နေသွားသုဒ္ဓဒိန် 355 ရောက်ရှိသောနေ့တွင် နှောင်းတန်ခူးလဆန်း7ရက် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာချေဦးမည်။ ထိုနေ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ ဖြစ်ပါသည်။ (ခရစ်နှစ် 6ရက်- ဧပြီလ- 2014)
ထို့ကြောင့် မြန်မာသက္ကရာဇ် 1375 ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း7ရက်ဟု မှတ်သားမိသော် . . .
ဦးတန်ခူး လဆန်း7နေ့တွင်လည်း 1ရက်သား မွေးကင်းစ . . မွေးဖွားပြီး ရက်ပေါင်း 355 ရက်သို့ ရောက်ရှိသော် တန်ခူးလဆန်း7ရက်ပင် ဖြစ်သဖြင့် 1 ရက်သား မွေးကင်းစ အဖြစ် အမှတ်မှားနိုင်ပါသည်။ တဖန် ဗုဒ္ဓဟူးသား နှင့် တနင်္ဂနွေသား ဟူသော ပြဿနာသည်လည်း ပူးတွဲပါဝင်လာပြန်သည်။ ထိုသို့သော ပြဿနာများကြောင့် နှစ် (၃၀၀) မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ပြက္ခဒိန် converter တွင် နှောင်းတန်ခူး၊ နှောင်းကဆုန်တို့အား တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လတို့ဖြင့် မှားယွင်းရွေးချယ်မိပါက အဖြေ (၁)နှစ်ကွာခြားနိုင်ပါသဖြင့် သတိပြု ရွေးချယ်ပါရန် ဟု မှတ်ချက် ရေးသားထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ ပြဿနာများကို သာမန်သူများထက်ပို၍ ဗေဒင်ဟောပြောသူ ဆရာများအနေဖြင့် လွန်စွာသတိထား သင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗေဒင် မေးလာသူမှ 1375 ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း7ရက် တနင်္ဂနွေနေ့သားပါဆရာ (နှောင်းတန်ခူးလဆန်းဟုမပြော) ဟု ပြောလာသည်ဆိုပါအံ့။ ပြက္ခဒိန်အကြောင်း လေ့လာမှုမရှိသော ဗေဒင်ဆရာမှ ပြက္ခဒိန်စာအုပ်ရှိ ဦးတန်ခူးလဆန်း7ရက်နေ့အား လှန်ကြည့်ပြီး အဲဒီနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပါ မယုံရင် ဒီမှာကြည့်ဟုဆို၍ ပြက္ခဒိန်စာအုပ်အား ဖွင့်ပြမိသော် မခက်ပါလား။ ပြက္ခဒိန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး မေးသူကလည်း ၀ိုးတိုးဝါးတား နဝေတိန်တောင် ဖြစ် . . ဆရာကလည်း ဟုတ်မှန်ပြီထင်သဖြင့် တနင်္ဂနွေ ရာဇဖွားဖြင့် ဟောရမည်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားဖြင့် ပုတိဖွား အဟောတွေဟော၊ တိုင်တွေကလည်း အလွဲလွဲအချော်ချော် . . ယတြာတွေချေခိုင်း . . ဟုတ်တော့ ဟုတ်ချေပြီတကား။ ထိုသို့ မဖြစ်စေရန် ဆရာမှ လာမေးသူအား မြန်မာပြက္ခဒိန်အား မှတ်သားရာတွင် နှောင်းတန်ခူး၊ ဦးတန်ခူး စသည်ဖြင့် မှတ်သားသင့်ကြောင်း လမ်းညွှန်တည့်မတ် ပေးရပေလိမ့်မည်။ ယခုဆောင်းပါးအား ဖတ်ရှုပြီးသူများအနေဖြင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သူများအား နှောင်းတန်ခူး၊ ဦးတန်ခူးအကြောင်း ခွဲခြားမှတ်သား တတ်စေရန် ပြန်လည် ပြောပြပေးစေလိုပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ရက်စွဲသာ မှတ်ထားရင် ပြီးတာပဲ။ လဆန်း၊ လဆုတ်တွေ ဘာကြောင့် မှတ်ရတာလဲ ဟုဆိုပြန်ချေသော် လူတို့၏ အလုံးစုံ ဆောင်ရွက်ဖွယ် ကိစ္စဟူသမျှတို့ကို လမင်း၏ အခြင်းအရာဖြစ်သော တိထီ တို့ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရသဖြင့် မြန်မာပြက္ခဒိန်များတွင် လဆန်း၊ လဆုတ်စသည်တို့ကို အလေးထား ဖော်ပြရခြင်းကို မြန်မာပြက္ခဒိန်အကြောင်းတစေ့တစ်စောင်း(1) တွင် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆောင်းပါး ပြန်လည် ဖတ်ရှုပါဟုသာ ပြောရုံမှတပါး ဆိုဖွယ်မရှိပြီ . . . အင်္ဂလိပ်ပြက္ခဒိန်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် အရေးပါလှသော ဥပုသ် သီတင်း၊ လဆန်း၊ လပြည့်၊ လဆုတ်၊ လကွယ် ၊ စသည်တို့အား ကြည့်ရှု မှတ်သားနိုင်သော ပြက္ခဒိန် မဟုတ်ပါချေတကား။
လူတိုင်း စိတ်မ၀င်စားသော မြန်မာပြက္ခဒိန်အကြောင်းအရာအား ဖတ်ရှုသူများအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အားဆေးလေးတစ်ခွက်အဖြစ် comment လေးများ ရေးထားခဲ့စေချင်ပါသည်။ နောက်မှ ဆက်ပါဦးမည် . . .
ဆောင်းပါးလဲ ပြီးသွားပြီဆိုတော့ စာရှုသူများ မေးခွန်းလေး တစ်ခု မေးချင်ပါသည်။
သက္ကရာဇ် 1375 ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း7ရက်သည် မည်သည့်နေ့ ဖြစ်ပါသနည်း။ :)
စာရှုသူမှ ဘယ်တန်ခူးကို မေးတာလဲ။ နှောင်းတန်းခူးကို မေးတာလား။ ဦးတန်ခူးကို မေးတာလားဟု ကျွန်တော့်အား ပြန်လည်မေးချင်စိတ် ရှိလျှင်ပင် ဤဆောင်းပါးအား ရေးသားရကျိုးနပ်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြက္ခဒိန် ကမ္ဘာ့အလယ် ၀င့်ထည်နိုင်ပါစေသတည်း . . .
Posted by aha at 9:58 PM 1 comments